I-Chic, i-Ocean-View Penthouse ene-Plunge Pool
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguElize
Emva kosuku olunomdla, thatha idiphu ehlaziyayo kwi-infinity plunge pool kwaye ujonge kulwandle olumangalisayo kunye neembono zeentaba kwibalcony. Galela iglasi yewayini, uhlale ecaleni kweziko lebhastile langoku, kwaye uyonwabele ukulungiswa kwale penthouse ye-chic.
“Indlu yokulala ijonge emantla, ngoko unokubukela ilanga litshona emva kolwandle.”
- Elize, umbuki zindwendwe wakho
Ibhalkhoni, Igumbi lokuhlambela elisegumbini lokulala, I-King bed, Izinto ezifakwa efestileni zokwenza indlu ibe mnyama, Ukubona ulwandle, Umatshini okhupha umoya obandayo okanye oshushu
Igumbi lokuhlambela elisegumbini lokulala, I-Queen bed, Izinto ezifakwa efestileni zokwenza indlu ibe mnyama, Ukubona ulwandle, Umatshini okhupha umoya obandayo okanye oshushu
Ibhedi elala umntu omnye, Igumbi lokuhlambela elisegumbini lokulala, Umatshini okhupha umoya obandayo okanye oshushu
4.75 (iingxelo zokuhlola 8)
Le flethi iseCamps Bay, enye yezona ndawo ziphezulu eKapa. Iindawo zokutyela ezilungileyo, imivalo ye-hip cocktail, kunye ne-boutiques ezifashisayo zonke zikumgama wokuhamba. Hamba uye elunxwemeni ngemizuzu, okanye uhambe intaba kwiPaki yeSizwe yeTafile.
Umgama ukusuka eCape Town International Airport
imizuzu eyi-27 ngemoto xa indlela ingaxakekanga
Umbuki zindwendwe ngu- Elize
Idiphozithi Yokhuseleko - ukuba wenza umonakalo kwikhaya, usenokubhataliswa ukuya kutsho kwi-R20000